UKUQHUBEKA - IMAKEFOOD INTERNATIONAL CO., LTD
Izinhlanzi Ezithosiwe Nesinkwa Esenziwe Ngaphambili
Sihlukanisa imikhiqizo yethu ukuhlangabezana nezidingo zemakethe.
Ukugcina ukuthengwa okusimeme kuthina kubaluleke kakhulu empumelelweni eqhubekayo yebhizinisi lethu kanye nomkhakha wonkana.
Njengomunye wabathengisi bezinhlanzi zasolwandle emhlabeni, sinesifiso esinikezwe impilo yesikhathi eside yolwandle lwethu. Inani elibalulekile lokudla kwasolwandle kubanjiswa endle okungaholela ekudobeni ngokweqile, ekubambeni okungafuneki, nasezindleleni zokubamba ezilimazayo. Ngezenzo zethu, sidinga ukuqinisekisa ukuthi sivikela indawo yasolwandle kanye naleyo miphakathi ethembele ekuvuneni izinsiza zayo, ezizukulwaneni ezizayo ezizayo.
Ukuzibophezela kwethu ekusimameni kokudla kwasolwandle kuyinto yesikhathi eside njengoba sibona ukuthi akukho ukulungisa okusheshayo. Sisekela lezo zindawo zokudoba ezinemikhuba efanelekile yokudoba ezinhliziyweni zako konke abakwenzayo.
Sithatha umbono wokuthi sidinga ukusebenza ngaphakathi embonini ukuze siqondise futhi sibe nomthelela, ukunxenxa amakhasimende ethu nabahlinzeki ngezindlela eziqhubekayo zokubamba nokukhiqiza.
Sisekela umsebenzi wezinhlangano eziningi ezingekho ngaphansi kukahulumeni ezifana ne-MSC (Marine Stewardship Council) kanye ne-Alaska RFM (i-Responsible Fisheries Management) ebeka amazinga aphezulu embonini ukuqinisekisa ukuthi kunomthelela omncane kwezemvelo kwi-Global Fisheries yethu.
Izimiso zethu ziyala ukuthi:
Funa ukugunyazwa okuzimele okuvela eceleni lapho kungenzeka khona futhi unikeze kuqala abahlinzeki abagunyaziwe.
Sifuna ukwazi umthombo nomsuka wemikhiqizo esiyithengisayo futhi sizame ukunciphisa ukufakwa kwempahla lapho kungenzeka khona.
Asikaze sidayise ngamabomu imikhiqizo elimaza imvelo noma ebeka engcupheni ukusinda kwezinhlobo zezilwane ngaphandle kohlelo lokulungisa ukuqinisekisa kokuqina komkhiqizo.
Siqinisa amakhasimende ethu nabahlinzeki ukuze benze izinqumo eziqhubekayo.
Sethula ngempumelelo iphakethe lethu elisha lokufaka umquba wemikhiqizo yethu yasolwandle efriziwe ngonyaka we-2020. Isifiso sokwenza umthelela futhi sakhe ukunyakaza siholele ekuguqukeni kweMakefood ekusetshenzisweni kwephakeji ebekekayo. Ngokwenza lokhu siyethemba ukwenza umthengi, acabange ngokucophelela ngomthelela wepulasitiki ongasetshenziswanga onawo emvelweni; futhi ngokubambisana singaqwashisa ngomkhiqizo waso oweqile. Inhloso yethu, hhayi nje ukugcina izindawo ezisemadolobheni zihlanzekile kepha okubaluleke kakhulu, yizilwandle zethu, lapho kuvela khona imikhiqizo yethu. Ngokulandelayo, ukunciphisa izinto ezingezinhle ezihambisana nomkhakha wezokudla kwasolwandle.
EMakefood sithathe isinyathelo sokuqala, futhi ngokubambisana, sinethuba lokwakha ikusasa elingcono futhi elihlanzekile. Ukukhuthaza ukusimama ngokusebenzisa izinto ezintsha.
Asikholwa ukuthi le nqubo izoke iyeke. Akukho lutho oluyohlala lusimama ngokuphelele. Lokhu sikubona njengohambo hhayi indawo.
I-Makefood izohlinzeka amaklayenti ethu ngezinsizakalo ezinhle kakhulu. Simi ngemuva kwemikhiqizo yethu futhi sibhekana nanoma yiziphi izingqinamba ezingase ziphakame ngesikhathi sokuthola, ukuthunyelwa kanye nokulethwa. Sizonikela ngamanani ancintisanayo kuzo zonke iziqukathi - okuqinisekisiwe.
Uma unemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma u-pricelist, sicela ushiye imininingwane yakho yokuxhumana futhi sizoxhumana nawe kungakapheli amahora angama-24.
Igumbi 4810, Huarun Isakhiwo A, No.6 Shandong Road ， Qingdao ， China
Hot Products, Ibalazwe, I-China Frozen Tilapia GS, Ukusikwa kwenyanga okubandayo kweTilapia, I-China Frozen Tilapia, I-Frozen Tilapia GGS, I-China Tilapia GS, I-ASC tilapia fillet,